काठमाडौंमा कहाँ हुन्छ देहब्यापार ? को–को जान्छन् ? | langtangnews.com
तीन महिना लामो अध्ययनपछि उक्त तथ्य फेला पारेको संजालले जानकारी दिएकोे छ । संजालले गोंगबु, कलङकी लगायतका स्थानका आकाशे पुल तथा त्यस वरपरका क्षेत्रमा यौनकार्यका लागि सेटिङ मिलाउने काम भएको भेटेको छ । देह–व्यापारमा ११ वर्षदेखि माथिका बालबालिका र किशोरीलगायत प्रौढ महिला पनि संलग्न रहेको अध्ययनले देखाउछ । यौनकार्यका लागि व्यक्ति वा स्थान छनौट गर्दा सांकेतिक रुपमा कुरा हुने, कुरा मिलेपछि गेष्ट हाउसमा जाने गर्दछन् । यौन व्यापरमा सामान्यतः ग्राहक र यौनकर्मीबीच विभिन्न समयको लागि मोलमोलाइ हुने गर्दछ ।
त्यस्तै किशोरीहरु यौनजन्य कार्यमा लाग्दा किशोरीहरुको पूर्ण रुपले शारीरिक तथा मानसिक विकाश नभइसकेको हुनाले धेरै खतरा रहेको थापाथली प्रसूती गृहका वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा निर्देशक जागेश्वर गौतम बताउँछन् । सानै उमेरमा यौन व्यावसायमा लाग्दा उनीहरुको कार्य समाजले थाहापायो भने समाजबाटै बहिस्कृत हुन पर्ने, आर्थिक लाभको मोहमा परेर पढ्न लेख्न छाडिदिने र यौनजन्य रोगहरुले आक्रमण गरेपछि उनीहरुको स्याहार सुसार गर्ने कोहीपनि नहुने हुनाले समग्र भविष्य नै डरलाग्दो हुने डा. गौतम बताउँछन् ।
हाम्रो समाजले यौनलाई विवाह पूर्व बन्देज गरेको हुनाले यौन व्यावसाय गर्नेलाई उनीहरुको विवाहबन्धनमा पनि समस्या आउन सक्छ । सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रुपमा कमजोर भएपछि यौनकर्मीले आत्महत्या समेत गर्नसक्ने डा. गौतम बताउँछन् । किशोरीमा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण योनी तथा पिसाबमा सङक्रमण वढेपछि विभिन्न रोगहरुबाट पीडित हुने बरिष्ठ मृगौला रोग बिशेषज्ञ डाक्टर ऋषी कुमार काफ्ले बताउछन । उनी भन्छन ‘ मानसिक तथा शारिरिक जोखिम त छदैछ, उनीहरुको मृगौलामा समेत गम्भिर असर पर्छ । ’
यस्तो दृश्य काठमाण्डौका विभिन्न गल्लीमा रातदिन देख्न सकिन्छ । तर समबन्धित निकाय मौन जस्तै छ । यो कार्य रोक्न केही पहल भएको छैन । यस अध्ययनमा एमएमएडी नेपाल, विस्वास नेपाल, क्याप नेपाल, आवाज नेपाल, दलित महिला उत्थान संघ लगायतका संस्थाहरुको संलग्नता थियो । सडक र सानातिना गेस्टहाउसमा हुने देहव्यापार प्रहरीको आम्दानीको स्रोत बनेको छ । बेलाबेलामा पक्राउ गर्ने र हप्ता असुल्ने गरिन्छ । ठूला होटलमा ठूलै कारोवार हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा रोकतोक छैन । देहब्यापारमा समेत ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भएको छ ।
Nuwakot express बाट